China 5.0-ton Forklift Marori Mugadziri uye Mutengesi | Wilk
WIK 5.0-tani Forklift Marori
Yakagadziriswa dhizaini: Chaoyang 6102 injini yedhiziri
Central uye yekumaodzanyemba kutapurirana kwemvura
Mafuremu maviri emasuo emamita matatu
Akanaka matsva matai
Bhokisi remidziyo / sevhisi pack
Performance sumo: gungano reinjini yekubuda kwezuva ,, simba, kuchengetedza kwezvakatipoteredza
Kutapurirana kweSouth Central, kumeso, kushanda
Linde mudhiraivho, hydraulic humburumbira, SMC yakanyarara yekuvhara hood
Hongchang yemhando yepamusoro musu furemu simbi, kwete, deform
Yakanaka nyowani, yakasimba kusakara, yakanaka kuvhunduka absorb,
Inesarudzo yekumisikidza: Chaoyang injini, tini huni injini
Imba injini dzeIslington
Chinyorwa chemvura kutapurirana, electromagnetic fluid fluid
Zvikamu zviviri 3.0 m, 3.3 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 m furemu yemusuwo
Zvikamu zviviri 3.0 m, 3.3 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 m yakazara yemahara furemu yemusuwo
Zvikamu zvitatu 4.5 m, 4.8 / 5.0 / 5.5 / 6.0 / 6.5 m yakazara yemahara yemusuwo furemu
Yakanaka nyowani gasi tai / yakasimba dhayi, kubuda kwezuva gasi tire / yakasimba dhayi, chengetedzo yezvakatipoteredza yakasimba tai
Zvinoenderana nezvinhu zvakasiyana, kuungana kwezvinhu zvakasiyana, senge kusuduruka padivi, bhegi rekotoni
Pepa roll roll clip, katoni clip, nezvimwe
WIK Huru technical parameter
Muenzaniso. WIK50 Muenzaniso. WIK50
Rudzi rwemagetsi Dhiziri. Yakazara kureba kwete forogo mm 3430。
Rated mutoro kg 5000。 Yakazara upamhi mm 2235。
Mutoro wepakati mm 600。 Kunonyanyisa kusimudza kukwirira kweforogo (ine rakavhara shefu) 4380。
Nokusimudza kukwirira mm 3000。 Suo remusuwo pasi kukwirira mm 2500。
Yemahara simudza kukwirira mm 205。 Mberi vhiri. 8.25-15-14PR
Forogo saizi mm 1220 × 150x60 Mavhiri ekumashure 8.25-15-14PR
Furemu yemusuwo yakatenderedzwa kumberi / 6/12。 Wheelbase mm 2250。
Minimum wekutendeuka nharaunda mm 3250。 Wheel chinhambwe kumberi vhiri / kumashure vhiri mm 1470/1700。
Minimum kurudyi kona kukanda mugero upamhi mm 5500。 Kuzvimiririra-kurema kwete mutoro Kg 7980。
Minimum kurudyi-kona chiteshi upamhi mm 2960。 Bhatiri voltage / V / Ah (12/80) × 2
Minimum pasi clearance mm 200。 Injini yemhando cY6102BG6
Iyo yepamusoro furemu kukwirira mm 2469。 Rated simba kw / rpm 81/2500。
Mberi kwekupfuura mm 610。 Rated torque Nm / rpm 353/1700。
Iyo yekumusoro yekumhanyisa kumhanya izere km / h 26。 Bodle X kufamba mm 102x118
Iyo yekumusoro yekusimudza kumhanya izere ne mm / m420 400。 Kuwanda sepombi 6。
Maximum traction izere neKN 51.4。 Kubviswa L 5.785。
Kunonyanyisa kukwira kugona% 20。 Mafuta tangi chinzvimbo L 120。
Kureba kwakazara neforogo mm 4650。 Kushanda kumanikidza Mpa 20。
Forklift mashandiro anogona kudzikisira kuwanda kwevashandi uye kusimba kwevashandi, kugadzirisa mashandiro ebasa, uye kushandisa zvizere nzvimbo dzenzvimbo dzemakombi, ngoro, uye matura. Iyo zvakare inopfupisa nguva yekushanda yekurodha, kuburitsa, kubata, uye kurongedza, inomhanyisa kudzoka kwemotokari nengarava, uye inovandudza Iyo degree rekuchengetedza kwebasa.
Yemukati yekuwacha forklifts inowanzo shandisa dizeli, peturu kana yakanyoroveswa petroleum gasi injini kupa simba. Ivo vanorema uye vanozvimiririra. Ivo anonyanya kushandiswa munzvimbo dzebasa dzine materu makuru, migwagwa isina kuenzana, zvinhu zvinorema, uye kwakanyanya mamiriro ekunze.
Rega ndiunze redhiyeta system yemukati yemoto forklift.
Iyo radiator system inosanganisira radiator uye hwindo remhepo, nezvimwe. Iyo radiator inonzi zvakare tangi remvura, iro rinoumbwa nezvikamu zvitatu: kamuri remvura inopinza, kamuri yekubudisira mvura uye nharaunda yekupisa kupisa. Iyo inotonhorera mvura (mvura) inoyerera mukati meiyo radiator musimboti, uye mweya unopfuura kunze kweiyo radiator musimboti, kuitira kuti kupisa kunosvirwa nemvura inotonhorera kubva mukati memoto injini inogona kuendeswa kumhepo yekunze, kuitira kuti iyo inotonhora tembiricha yemvura inogona kudzikiswa kutenderera zvakare. Iko kushanda kwehwindo remhepo kuita kuti mweya unoyamwa mukati neiyo fan ichipfuura neiri radiator kunatsiridza kushanda kweiyo fan.
Yemukati yekupisa forklifts inowanzo shandisa dizeli, peturu, yakanyoroveswa peturu peturu kana gasi enjini segesi, iine mutoro unorema matani 1,2 kusvika 8.0, uye inoshanda chiteshi upamhi hwe3.5 kusvika ku5.0 metres. Tichifunga nezvekuburitsa mweya uye ruzha, ivo anowanzo shandiswa kunze, mashopu kana dzimwe nzvimbo dzisina zvido zvakakosha zvekubvisa mweya uye ruzha. Nekuda kwekureruka kwekuzadziswa kwemafuta, inogona kuona kushanda kwenguva refu uye inogona kushanda munzvimbo dzakaomarara (semazuva ekunaya).
Kana iyo pombi yemvura isiri kushanda nemazvo kana nzvimbo yepakati pakati pevhiri rekutyaira uye vhiri rinotyairwa re fan fan chisizvo, bhanhire rinenge rakasununguka uye richitsvedza, kuitira kuti kumhanya kwevhiri rinotyaira kudonhe, kumhanya kwe pombi yemvura inodonha, uye kuyerera kwepombi yemvura kunodonha; Mugwagwa wakavharwa uye kuyerera kwemvura hakuna kutsetseka; kana iyo thermostat malfunctions uye kutenderera kwemvura kweiyo system kwese kunomiswa; izvo zviri pamusoro zvinhu zvinoita kuti mukati mekushisa kwemvura yeinjini yekumesa yemukati kusimuka zvakanyanya, zvichikonzera iyo inotonhorera system kuti iwedzere kupisa. Uye zvakare, injini yemoto yemukati inozopisa kupisa system nekuda kwekumwe kushanda kwakadai senge isiri nguva yekuvesa.
1. Forklift Marori madiki muhukuru, asi ane kugadzikana kwakanaka uye akakodzera kudhonza. Izvo zvinoshandiswa kwenguva isingaperi. Ivo anowanzo shandiswa kunze. Inofananidzwa neinjini peturu, injini dzedhiziri dzine masimba ari nani (zviri nyore kupisa zvakanyanya pakumhanya kwakaderera, kugona kuita pfupi-dunhu, uye kugona kushanda kwenguva yakareba), uye nemitengo yakaderera yemafuta. Nekudaro, ivo vane hombe kudedera, ruzha rukuru, hukuru hwekubva, kuzvidzora, uye mutengo wakakwira. Mutoro unogona kubva pamatani 0.5 kusvika pamatani makumi mashanu.
2. Forklift Marori madiki muhukuru, asi ane kugadzikana kwakanaka uye akakodzera kudhonza. Ivo anoshandiswa kwenguva isingaverengeki uye anowanzo shandiswa kunze. Injini dze peturu dzine diki chitarisiko, gadziriso yechiedza, simba rakakwira rekubuda, ruzha rwekushanda pasi uye kudedera, nemutengo wakaderera. Nekudaro, epeturu injini ine nani zvirinani pfupi-redunhu kugona, kwenguva refu-kushanda mashandiro kugona, uye zvine yakaderera mafuta mafuta. Mutoro unogona kuva 0,5 matani kusvika ku4,5 matani.
3. Balanced heavy-duty liquefied petroleum gas forklift (izere zita LPG) iri yakaenzana-inorema-basa peturu forklift yakashongedzerwa nedhiefied petroleum gasi inoshandura mudziyo, iyo yakaderedzwa kuita LPG forklift, iyo inogona kushandiswa kuchinja pakati peturu uye yakasanganiswa gasi kuburikidza nechinja. Mukana wechipiri weLPG forklifts ndeyokuti gasi rekudzimisa rakanaka, uye gasi remarara rehydrolyzed kabhoni (CO) rakanyanya kudarika iro remafuta epeturu. Mari yemafuta yakaderera (15KG yemafuta akanyoroveswa akaenzana nemalita makumi maviri epeturu), uye inogumira kumabasa emumba nekurambwa kwakadzika kwezvakatipoteredza.
Pashure: 7.0-ton Forklift Marori
Zvadaro: 5.0 tani dhiziri kure-mugwagwa Forklift
WIK30Dual mafuta forklift